MUQDISHO(P-TIMES)- Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomoow oo kamid ah Culimada Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxa uu sheegay in Wixii ka horeeyey sanadihii kontonaadkii dalka Soomaaliya in aan laga aqoon wax la yiraahdo Wahaabiyo.
Sheekh Soomow oo maanta ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in waxa loogu yeero Itaxaad, Ictisaam iyo Al-islaax ay dalka yimideen ayna dalka oo shaaficiyo ah u soo direen dalal shisheeye oo soo maalgeliyay.
Sidoo kale Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed ayaa tilmaamay in dalka Soomaaliya oo caqiidadiisa lagu soo duulay ay ka dhasheen qaraxyo, dil iyo barakicin iyo arrimo kale oo aan wanaagsanayn.
”Wixii ka horreeyey kontonaadkii dalkan lagama aqoon Wahaabiyo, Itaxaad, Ictisaam, Al-islaax waxaasoo dhan hada ayey yimideen waxna way la yimideen oo dalal shisheeye ayaa dalka oo Shaaficiya ah usoo diray soona maalgaliyey” ayuu yiri
Isaga oo sii hadlayay ayuu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ilaashadan caqiidadooda iyo diintooda isla markaasna ay sameeystaan hogaan culimo.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomoow ayaa waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya u sheegay in dalka culimadiisa ay yihiin Ahlusunna Waljameeca oo aysan jirin kuwo kale.
Wahaabi waa munaafuq.
Lacag u sheeg markaasa saad doontid u adeegso